Fanokafana ny lisi-pifidianana : Tsy ampiasaina amin’ ny « 2e tour » -
AccueilSongandinaFanokafana ny lisi-pifidianana : Tsy ampiasaina amin’ ny « 2e tour »
Fanokafana ny lisi-pifidianana : Tsy ampiasaina amin’ ny « 2e tour »
Manomboka ny voalohan’ny volana desambra izao dia hisokatra ny lisi-pifidianana, saingy kosa tsy hampiasaina amin’ ny dingana faharoa. Mazava ny voalazan’ny lalàna amin’ ny daty voatondro fa hanokafana ny lisi-pifidianana, na ilay antsoina hoe “ revision annulé”, izany hoe amin’ ny volana mey vao azo ampiasaina ny fanitsiana natao tamin’ ity volana desambra ity. Mbola tsy ilay fanitsiana ankapoben’ny lisi-pifidianana akory ity tanterahina amin’ ny volana desambra ity, izany hoe haverina mihitsy ny fanisana ny mpifidy rehetra, ary tsy hijerena ny lisitra teo aloha intsony. Io indray ilay antsoina hoe “revision totale”, na fanaovaozana tanteraka ny lisi-pifidianana. Io fanavaozana tanteraka io dia isaka ny 10 taona no hanatanterahana azy, ka amin’ ny 2023 indray ny fanavaozana tanteraka manaraka. Izany hoe tsy afaka ny hifidy amin’ ny fifidianana dingana faharoan’ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao, izay tafiditra anatin’ny fanavaozana, fa kosa afaka hifidy amin’ ny fifidianana ben’ ny tanàna. Izany hoe mba tsy hisian’ ny fimenomenonana indray, dia tokony hazakazaka ireo izay tsy tafiditra anatin’ ny lisi-pifidianana, raha te hifidy amin’ ny volana mey izao.
Manoloana ny zava-misy amin’ izao fotoana izao kosa, dia tsara ny tokony hitondrana fanazavana goavana mba tsy handraisan’ireo olom-pirenena sasany izany mivilana. Matetika mantsy amin’ny fotoanan’ ny fifidianana tahaka izao, dia mora sintonina ny lakolosin’ny vahoaka. Sao mantsy misy alaim-panahy indray hanakorontana sy hitarika ny vahoaka ho any amin’ny tsy izy, ka hilaza fa efa nisoratra anarana nefa mbola tsy mifidy .Tsara izany ny handraisan’ny rehetra anjara amin’ ny fanazavana, fa tsy ampiasaina amin’ ny fifidianana ho avy izao ity lisitra ity. Tsy ny Ceni ihany anefa no manana anjara amin’ ny fanazavana ny sain’ ny vahoaka, fa kosa manana anjara feno amin’ izany ireo fiarahamonim-pirenena. Fifidianana hiankinan’ny fiainam-pirenena ny fifidianana amin’ ny faha-19 ny volana desambra izao, ka ilaina ny fahamailoana sy ny fanazavana ny saim-bahoaka. Ireo izay tsy anatin’ny lisi-pifidianana sy ireo feno 18 taona, dia afaka manantona eny amin’ ny fokontany manomboka ny voalohan’ny volana desambra izao, saingy amin’ ny fifidianana ny volana mey kosa vao mandray anjara amin’ny fifidianana.
Anisan’ny tetikasa goavana ho an’ny mpitia fanatanjahantena sy ny tanora ny trano fampiofanana eny Andohatapenaka, eny amin’ny Kianjan’ny Maki. Efa andalam-pahavitana izany fotodrafitrasa tafiditra amin’ny tetikasan’ny Filoham-pirenena izany. Noho izany indrindra, dia tonga nitsidika ny ...Tohiny